Dowladda Hoose ee Muqdisho oo qabtay kulan looga hadlayo canshuuraha ganacsiga iyo guryaha. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Hoose ee Muqdisho oo qabtay kulan looga hadlayo canshuuraha ganacsiga iyo...
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee Maamulka iyo Maaliyada Ismaaciil Cabdi Guure ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay canshuuraha, iyadoo kulankan ay ka qeyb galeen Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka.
Kulanka ayaa lagu soo bandhigay Buugga Tusaha Macaamiilka iyo Qorshe Hoowleed laba sano, oo ay yeelan doonto Waaxda Canshuuraha ee D/Hoose. Ka qaybgalayaasha ayaa aad uga dooday bandhigyada labadaasi dukumiinti ee la soo bandhigay waxa ayna ka bixiyeen talooyin dhoowr ah oo ay muhiim tahay in lagu daro qorshooyinka.
Qaar ka mid ah la taliyaasha Duqa Magaalada Muqdisho oo qayb ka ahaa shirkaani ayaa ku taliyay in la joogteeyo kormeerka habka shaqada canshuuraha lana sahlo wxiii fududeeyn karo hoowshaasi sidoo kale in tababaro joogto ah loo sameeyo shaqaalaha Waaxaha Dakhliga soo galiya D/Hoose gaar ahaan waaxda Canshuuraha si kor ugu kaco dakhliga guud ee soo gala Maamulka D/Hoose.
Waxaa sidoo kale shirka goob joog ka ahaa taliska ugu sareeya ee Ciidanka Ilaalada Deegaanka Xamar ee loo yaqaana Minishiibiyada kuwaaso kaalin ama door weeyn ku leh aruurinta canshuuraha D/Hoose. Waxaa sidoo kale qaayb ka ahaa kulankaani waaxaha shaqo wadaagta la ah waaxda canhsuuraha sida Waaxda Faya-dhoorka iyo tan suuqayada .
Talooyinka ka qaybgalayaasha iyo doodo dheer ka dib, waxa shirka soo xeray Md Ismaaciil Guure waxa uuna u sheegay mas’uuliyiinta kale in goor dhaw la soo saari doono nuqulada ugu danbeeya ee Buugga iyo Qorshe hoowleedka labada sano ah ee Waaxda Canshuuraha ee D/Hoose. Dhawaanahaan D/Hoose ee Muqdisho ayaa ku waday dadaalo ay ku kobcinayso dakhliga soo gala oo ay ka soo xareeyso ilaha dhaqaala aruurinta ay leedahay si looga jawaabo waxna looga qabto baahiyaha ka jira adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Magaalada Muqdisho.
Turkiga oo 30 Million oo dollar ugu deeqay Soomaaliya
Wafdi ka socad QM oo gaaray Dhuusamareeb
MW Laftagareen oo Ciidamada faray inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah...
Madaxweyne Laftagareen oo Baydhaba kaga qeybgalay xaflad loo sameeyay CXDS